ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2020 – Healthy Life Journal
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရချိန်၊ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ ဝေးတဲ့အချိန် စတဲ့ဘ၀မှာ စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး နာကျင်ဝမ်းနည်းကြေကွဲရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ လူအများစုဟာ စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ကယ်လိုရီများတဲ့ အစာတွေကို စားမိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ်အလေးချိန်က မတန်တဆ မြင့်တက်လာတတ်တဲ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုလည်း လျော့ပါးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်...
မိခင်နို့စို့တဲ့ကလေးနဲ့ နို့မှုန့်သောက်ပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေး ဘာကွာခြားသလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မိခင်နို့ပုံမှန်စို့ရတဲ့ကလေးက ကြီးထွားလာတဲ့အခါ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းပါတယ်။ နို့မှုန့်နဲ့ကြီးလာရတဲ့ ကလေးကတော့ နည်းနည်းဝကစ်ကစ်လေး ဖြစ်နေတာပေါ့။ တချို့မိခင်တွေဆို ကလေးကို လေးလလောက်နို့တိုက်ပြီးရင် ဆက်မတိုက်ချင်တာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း အလုပ်ပြန်ဝင်ရတာကြောင့် ကလေးကို သေသေချာချာ နို့မတိုက်နိုင်တော့တာမျိုး...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) Q. ကြွက်သားမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း (Paralysis) ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲဆရာ။ A. Paralysis ဆိုတာက ကြွက်သားတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ကြွက်သားအစုတစ်ခု အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့...
အိမ်တွင်းကုထုံးဖြင့် သက်သာနိုင်မည့် ဝေဒနာသုံးမျိုး
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) မှက္ခရုပေါက်ခြင်း အသားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှစ်မျိုးကို သုံးပါ သံဓာတ်ပမာဏ လျော့နည်းတာက မှက္ခရုတာရှည်ဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ ရောဂါပိုးကို တွန်းလှန်ပေးတဲ့ သွေးဖြူဥတွေက သံဓာတ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မှိုပိုးတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ့်ဓာတ်တွေကို ထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါ။ သံဓာတ်အဆင့်က သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်လောက်အောင်...
ဆေးလိပ်သောက်သူတွေက ဆေးလိပ်သောက်ရတာကို သဘောကျကောင်း ကျနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးလိပ်ကတော့ သင့်နှလုံးကို ကြင်နာနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် နှလုံးအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို အမေရိကန်အမျိုးသား နှလုံး၊ အဆုတ်နဲ့ သွေးဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်က အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် သွေးတွေခဲသွားပြီး သွေးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေ တိုးပွားနေပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လူဦးရေရဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်တယ်။ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်ရောက်ရင် သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ...
သွေးတွင်းမကောင်းသော အဆီများခြင်း မဖြစ်စေရန်
ငွေကြယ်စင်ယံ သွေးတွင်းအဆီများတာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ သွေးတွင်းအဆီမများစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ (၁) ၀က်ဆီ၊ အမဲဆီ၊ စားအုန်းဆီတွေကို လုံးဝရှောင်ပါ။ အဆီအအိမ့်များတဲ့ ထောပတ်တွေ၊ ချိစ် (Cheese) တွေကိုလည်း ရှောင်ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ထပ်ပြန်ကြော်ဆီတွေကို ရှောင်ပါ။ ဆီကိုထပ်ခါတလဲလဲ...
ကင်ဆာမဖြစ်အောင် နေ့စဉ်စားသောက်ရာတွင် သတိပြုသင့်သည်များ
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကြိုတင်ကာကွယ်မှုက ကုသမှုထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးဟာ ကင်ဆာရောဂါအတွက် ပိုပြီးမှန်ကန်တဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာမဖြစ်ဖို့အတွက် နေ့စဉ်စားသောက်သင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို သိထားပြီး နေ့စဉ် ကိုယ်စားသောက်ရာမှာ သတိထားဆင်ခြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ စားသောက်သင့်သည်များ (၁) ပဲအမျိုးမျိုး၊...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကျွန်တော် သက်ကြီးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တင်ပါးမှာ မကြာခဏဆိုသလို သွေးစုနာလို ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီသွေးစုနာပေါက်တာကို အမြစ်ပြတ်အောင် ဘယ်လိုကုသမှု ဆောင်ရွက်ရမှာလဲ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ကျွန်တော် သွေးစုနာပေါက်တာကို...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အသက်က ၉၀ ရှိပြီ။ ခြေထောက်တွေ၊ လက်တွေရောင်ပြီး ကပ္ပာယ်အိတ်ပါရောင်နေတာ ဘယ်လိုကုသရမလဲရှင်။ ကပ္ပာယ်အိတ်က ကလေးတွေရဲ့ခေါင်းလောက်ရှိတယ်။ Julies Julies (FB) A. ခြေလက်ဖောပြီး ကပ္ပာယ်အိတ်ဖောရောင်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပဲ...
ဖေ‌ဖျောဝါရီ လ၊ 2020 ခုနှဈ